ဘယ်လို ICO Market ကပြောင်းလဲကြလိမ့်မည် 2018? - Blockchain သတင်းများ
2017 ICOs များ၏အရေအတွက်ပေါက်ကွဲကြီးထွားကိုမြင်လျှင်, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဆွဲဆောင်ဖို့တော်လှန်ရေးလမ်းအဖြစ်. ဒီနှစ် 234 ICO စီမံကိန်းများထက်ပိုမိုကြီးပြင်းခဲ့ကြ $3.7 ဘီလီယံအထိ, စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အများဆုံးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမေလမှအောက်တိုဘာလမှဆွဲဆောင်ခံရအတူ, Coinschedule အညီ. ကျွမ်းကျင်သူများကကြောင့်လာမည့်နှစ်တွင်ယုံကြည်, သို့သော်, ဒီလမ်းကြောင်းသစ်ကျဆင်းမည် ICO စျေးကွက်သိသိသာသာလျှော့ချရေးနှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်.
ဂျယ်ရီ Brito အဆိုအရ, အဆိုပါအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းကအကြွေစေ့-စင်တာအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ, အစိုးရများလက္ခဏာသက်သေရောင်းအားကိုကျော်ထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်. ဤနှစ်တွင်အမေရိကန် Securities and Exchange Commission (SEC) ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်သို့မဟုတ်ရောင်းချကြောင်းကို virtual ဒင်္ဂါးပြားသို့မဟုတ်တိုကင်အာမခံဖြစ်အံ့သောငှါကပြောပါတယ်. သူတို့အာမခံရောက်နေတယ်ဆိုရင်, တစ်ဦး ICO တွင်ဤကို virtual ဒင်္ဂါးပြားသို့မဟုတ်တိုကင်၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုနှင့်ရောင်းချမှုဖက်ဒရယ်အာမခံဥပဒေများဘာသာရပ်များမှာ. အဆိုပါကိစ္စနှင့်စပ်လျဥ်း, အဆိုပါ SEC အများအပြား ICO စီစဉ်ဆန့်ကျင်ဥပဒေပြဌာန်းနှင့်အတူလိမ်လည်မှုနှင့် Non-လိုက်နာမှု၏စွဲချက်တင်သွင်း. Brito အခြားနိုင်ငံများတွင်ထင်, Anti-လိမ်လည်မှုအစီအမံယူမယ့်ထားတဲ့, အမေရိကန်ဥပမာအတိုင်းလိုက်နာပါလိမ့်မယ်.
တိုကင်နံပါတ်ရောင်းအား SEC ၏စည်းမျဉ်းများလိုက်နာရန်ဘို့လိုအပ်ကြောင်း, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အတူပေါင်းစပ်’ သာ. ကြီးမြတ်ယုံကြည်မှုအဘို့အလိုဆန္ဒ, အသစ်တစ်ခုကိုလမ်းကြောင်းသစ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ. တွင် 2018, သူတို့ရောင်းချခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်မတိုင်မီကျနော်တို့ပိုကောင်းတိုကင်အရည်အချင်းပြည့်မှီပါလိမ့်မယ်အသစ်တိုကင်၏ယဇ်ဘို့ပလက်ဖောင်းပေါ်ပေါက်ရေးကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်, နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကသူတို့ကိုအကြောင်းကိုပိုကောင်းတရားစီရင်ပိုင်အောင်ကူညီပေးပါမည်.
Brito ကြောင်းကနဦးခန့်မှန်း, ဤအပလက်ဖောင်းသာအသိအမှတ်ပြုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်.
ဒါကြောင့်, စက်မှုလုပ်ငန်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြစ်, ကျနော်တို့က ICO ပူဖောင်းကွဲမူကြောင်းကိုရိပ်မိစေခြင်းငှါ. တကယ်တော့, တစ်ဦးကျဆင်းမှုရိုးရှင်းစွာနည်းပါးလာ Scan ကိုရှိတယ်လို့ညွှန်ပြမယ်လို့. သစ်တစ်ခုရန်ပုံငွေမော်ဒယ်အဖြစ်, ICOs နေဖို့ဒီမှာပါ.
အိုလီဗာ Bussmann, Bussmann အကြံပေးမှာတည်ထောင်သူနှင့်မန်နေဂျင်းမိတ်ဖက်, အဆိုပါမဟုတ်-များအတွက်အကျိုးအမြတ် Crypto ချိုင့်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ CIO နှင့်ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ္ဍာရေးကိုင်ပြီး UBS မှာမန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ, ခိုင်မြဲစွာ ICOs လောကီသားတို့သည်အတွင်ပိုမိုရင့်ကျက်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်နေ 2018 ပိုပြီးရိုးရာကစားသမားပါဝင်ပတ်သက်ရအဖြစ်. ရလဒ်အနေဖြင့်, သူတို့တစ်တွေစျေးကွက်သစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့သူတို့ရဲ့ IPO အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်ဖြစ်ပြီးမြေတပြင်လုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုဆွဲဆောင်၏ပိုကောင်းတဲ့စနစ်တကျနှင့်ပိုပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်မော်ဒယ်မှကပ်ပါလိမ့်မယ်.
လာမယ့် 12-18 လအတွင်းကျော်, ငါ ICO ရဲ့ attribute တွေရှိပါလိမ့်မည်မျှော်လင့်ထား, ထိုကဲ့သို့သောစာအုပ်အဆောက်အဦးအဖြစ်, စျေးနှုန်း, startup အကဲဖြတ်, နောက် ... ပြီးတော့. ကျနော်တို့ပြီးသားကြည့်ဖို့စတင်နေပြီင့်အဖြစ်, ကအဖြူရောင်စက္ကူ၏နောက်ကျောအပေါ်ရိုးရှင်းစွာငွေကြေးထောက်ပံ့မှုရရန်ခက်ခဲပါလိမ့်မည်. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအသံကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့်လင်းမြင်သာမှုမြင့်မားတောင်းမည်.
ဂယက်ထမှာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဌာန၏ဦးခေါင်းကို, Stephan သောမတ်စ်အထက်အငြင်းပွားမှုများနှင့်အတူသဘောတူ, Quora မှာမိမိ post ကိုအညီ (အသိပညာခွဲဝေမှု၏လူမှုရေးပလက်ဖောင်း). သူ ICO လှိုင်းယနေ့နှင့်များ၏ altcoin လှိုင်းကြားကမျဉ်းပြိုင်တွေအများကြီးကိုမြင် 2014. အဆိုပါကိစ္စနှင့်စပ်လျဥ်း, ကနဦးဖောင်းပွတစ်ဦးထက်ပိုလက်တွေ့နှင့်မျှမျှတတ ICO ဖို့လမ်းပေးတော်မူမည်; အများအပြား ICOs ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဆွဲဆောင်ဖို့သူတို့ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုပြောင်းလဲပစ်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်. မာကု Lurie ကိုလည်းလာမည့်နှစ်တွင်အားလုံးအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးစီမံကိန်းများကိုသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အများကြီးပိုအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမြို့တော်ရှိလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်.
ICOs အတွက် shakeout နှင့်အရည်အသွေးမှလေယာဉ်ရှိလိမ့်မည်. အနည်းငယ်တွေဆီကနေသွားပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ ICOs တစ်ပြန့်ပွားရှိလိမ့်မည်. လူအပေါင်းတို့သည်အမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးမြင့်စီမံကိန်းများသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အများကြီးပိုအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမြို့တော်ရှိလိမ့်မည်. ဒါကအကျိုးတူအရင်းအနှီးနှင့်ကြီးထွားရှယ်ယာကျည်နှင့်အတူဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်းကာလအတွင်းဖြစ်ပျက်င်, လွန်း. အများစုမှာကုမ္ပဏီများသည်မဆိုရန်ပုံငွေနိုင်ဘူး, ဒါပေမဲ့ရန်ပုံငွေနိုင်သူတွေကိုတကယ်မြင့်မားတဲ့တန်ဖိုးမှာလုပ်ခဲ့တယ်.
တွင် 2018, ICOs အောင်ကုမ္ပဏီများနှင့် Bitcoin-related ထုတ်ကုန်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်ထူးချွန်ဆုံးအပြောင်းအရွေ့အတွက်ချွတ်အများပြည်သူနှင့်မီဒီယာနို့ကွာမှဖြစ်လိမ့်မည် “ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေသား” ခံယူချက်, Wired အစီရင်ခံစာများအဖြစ်. ဒါဟာမရှိတော့သဘာဝကျပါတယ်တဲ့ဥပစာင်, ထိုသို့ပိုက်ဆံတူပေမယ့်တကယ်မဟုတ်သောနည်းပညာအသစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လျော်သောဥာဏ်ပညာလမ်းထဲမှာဆိုတော့ရဲ့. သို့သော် ICO သင်တန်းသားများကိုစက်မှုလုပ်ငန်း၏ပုံရိပ်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကြီးမားသောအားထုတ်မှုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်. ဝီလျံ Mougayar, တစ်ဦးလူသိများတဲ့ကနေဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံ, လုပ်ငန်းရှင်, တော်တော်များများနှင့် blockchain စာအုပ်ရေးသားသူ, လက်ရှိ ICO စျေးကွက်နဲ့တိုကင်မှားကစားသမားကိုဆွဲဆောင်ဖော်ပြထား.
မသာတိုကင်ဖြစ်ပါသည် 1.0 စီမံကိန်းများမှားအမျိုးအစားများကိုဆွဲဆောင်, ဒါပေမယ့်လည်းငွေကြေး spinning ထံမှအခွင့်အရေးယူလာဘ်မြင်သောသူကလူမှားအမျိုးအစားများကိုဆွဲဆောင်နေသည်, လူအစုအဝေးအနေဖြင့်ပြုစုပျိုးထောင်နှင့်လကတိပေး, ဆန့်ကျင်ကျင်းပမည့်အနည်းငယ်သာ်ခံမှုနှင့်အတူ. ပထမဦးစွာနဲ့ဗွေဆော်, ကျနော်တို့က blockchain ၏အခြေခံတီထွင်မှုပြန်လည်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်. ထိုအခါမှသာပြင်းထန်စွာလက္ခဏာသက်သေလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအကဲဖြတ်ဖို့လိုအပ်, Over-အင်ဂျင်နီယာမရှိဘဲလက္ခဏာသက်သေစွမ်းရည်. ကျနော်တို့ပြန်ညီမျှခြင်းသို့ blockchain ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်, မလက္ခဏာသက်သေ.
Vitalik Buterin အဖြစ်ကောင်းစွာတိုကင်အသစ်မျိုးအကြောင်းကိုပြောပါတယ်. သူကတိုကင်၏ 2018-2019 အတွက်အသစ်တခု type ကိုသေချာဖြစ်ပါသည်, ICO 2.0, ပိုပြီးရင့်ကျက် ICO စျေးကွက်အတွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်.
အခြို့သောကောင်းသောစိတ်ကူးများရှိပါတယ်, ကြောက်မက်ဘွယ်သောစိတ်ကူးများအများကြီးရှိပါတယ်, အလွန်အများကြီးရှိပါတယ်, အလွန်ဆိုးရွားစိတ်ကူးများ, နှင့်အတော်လေးအနည်းငယ် Scan ကိုအဖြစ်ကောင်းစွာ. ကျွန်မတိုကင်မျှော်လင့် 2.0 လူကိုတည်ဆောက်ခြင်းစတင်ပါလိမ့်မယ်အရာနှင့်မျိုး 2018 နှင့် 2019 လိမ့်မည်, ယေဘုယျအားဖြင့်, သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အရည်အသွေးကို၏ဖြစ်. ကျွန်တော်တိုကင်၏ပထမလှိုင်း၏အကျိုးဆက်များကိုလတ်-to-ရေရှည်၌ရှိကြ၏သောအရာကိုမြင်လျှင် start အထူးသဖြင့်တစ်ကြိမ်သာ.
ပြိုင်ဘက်ဂယက်ထ Bitcoin ...
Previous Post:Blockchain သတင်းများဇန်နဝါရီ72018
Next Post:ICO အကြောင်း: အဘယ်သူသည်လက္ခဏာသက်သေရောင်းအားစဉ်အတွင်းအများဆုံးရန်ပုံငွေများစုဆောင်း